मधुमेहका बिरामीहरुका लागि यी तरकारी हुन्छन ! फाइदाजनक ! – Samacharpati
मधुमेहका बिरामीहरुका लागि यी तरकारी हुन्छन ! फाइदाजनक !
काठमान्डाैँ, २७ माघ । ब्रोकाउलीमा भरपूर मात्रामा फाइबर हुन्छ । त्यसैले यो मधुमेह बिरामीहरुका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । फाइबरको उच्च मात्राको अलावा यसमा क्यालोरी निकै कम हुन्छ र पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए र सी हुन्छ । ब्रोकाउलीको सेवन गर्दा वजन घटाउन पनि सहयोग पुग्छ ।
लसुनले ब्लड सुगर कम गर्न एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । त्यसैले यदि तपाईं सुगरको बिरामी हो भने दैनिक विहान लसुनको दुई-तीन कल्ली चबाउने गर्नुस । यसले उच्च रक्तचाप तथा मुटुको बिमारीलाई पनि लाभ पुर्‍याउँछ । डाइबिटिजले क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ तर लसुन क्यान्सरलाई रोक्ने निकै शक्तिशाली औजार मानिन्छ ।
मधुमेहका बिरामीहरुले गाजरको सेवन गर्नैपर्छ । गाजरमा बीटा-क्यारोटिन पाइन्छ जसले इन्सुलिनलाई नियन्त्रण गर्छ ।